musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Kicheni Faucets / WOWOW Wall Yakakwira Pot Pot Filler MuBrashi Nickel
Nekuda kwayo ergonomic dhizaini, madziro akaiswa muhari dhizaina akasununguka kushandisa.
Yayo yakakwirira-yegiredhi simbi isingaiti inoita kuti ive yakasimba kwazvo.
Ichi chigadzirwa chinopa chef nerubatsiro rwekuvimbika.
2311300 mirairo yekuisa
Bronze nickel pot filler faucet 2311300
Kutsvaga zvimwe zvakakosha mune yako kicheni kiyi dhizaini kuti kicheni yako iite inoshanda uye yakagadzikana panguva imwe chete? Ipapo iyi briking nickel pot filler faucet inogona kuve chimwe chinhu kwauri. Iwe dzimwe nguva uri kunetseka kutakura hari huru dzemvura kubva kukicheni yako kunyura kune yako stove? Uku kusagadzikana ndekwenguva yakapfuura neiyi yakarukwa nickel pot filler faucet yeWOWOW. Pot filler faucets kazhinji anoiswa kuseri kwekicheni yako chitofu kuitira kuti uve nekubatana kwemvura pedyo nekwako yekubikira. Izvi zvinonyanya kukosha paunenge uchifanira kuzadza hari hombe nemvura yekubika. Haufanire kufambisa mapoto zvakare ayo anogona kupima huremu hwakawanda. Kunyanya kana iwe usiri kuda kudzikisa maoko ako kana ruoko, ichi chinogona kunge chiri mhinduro inobatsira kwazvo yekunyaradza kwako kwekicheni.
Chimwe chinonakidza mhedzisiro yechisimba chakabikwa nickel pot filler faucet yeWOWOW inyaya yekuti iwe unogona kuchenesa kicheni chako chitofu nyore, sezvo uine mvura yekubatana pedyo. Kuchenesa kuri nyore kwazvo nefiriji muhari yekuzadza. Iyo br br nickel pot filler faucet yeWOWOW yakarongedzwa nekaviri ceramic mavalasi kuitira kuvimbisa kusvetuka-isina ruzivo. Kana imwe yevharidzi yaizogara yakavhurika, izvi hazvingakonzere chero kunhuhwa chero. Izvo saka zvinogara zvichikurudzirwa kudzima mavhavha ese ari maviri kuve nechokwadi chekuti chitofu chako chekicheni chinogara chakaoma nguva dzese. Iwe zvirinani uve wakachengeteka pane kusuwa!
Yemazuva ano briking nickel pot filler faucet
Iyi chaiyo yakaiswa nickel pot filler faucet yeWOWOW ine maonero azvino. Iyo inonyatsopa rakakosha, rinobata kubata kune kicheni yako kunze kwekushanda kwayo kwakawedzera kukosha. Sezvo pot filler faucets isingazivikanwe zvakanyanya, vanhu vazhinji vangakubvunza iwe nezve izvi kana vaona kicheni yako. Izvo zvidiki zvinotarisisa zvinotungamira mumakicheni ndiyo faiki. Izvi zvinoreva kuti vanhu vanotaridzika kukwezva kumakitchen kicheni pavanotarisa kukicheni yako. Iyi brick nickel pot filler faucet inokodzera chaizvo mune chero yemazuva ano kicheni décor, uye zvechokwadi inokwezva vamwe inokosha.
WOWOW's brunch nickel pot filler faucet inogona kuve nyore nyore kusangana pamwe nemazuva ano kicheni faucets kuti iite kubatana kumwe kwekubatana mukicheni yako décor. Iyo mitsetse yakarebeswa pamwe nemipendero yakatenderedza inoumba mutambo unotamba. Vagadziri veWOWOW vanozivikanwa pasi rese sevanogadzira izvo zvakashinga kushongedza zvigadzirwa izvo zvinogona kuve nyore kushambadzirwa mune chero yepamusoro-notch magazini nezvekudhiza kwekugadzirwa kwekicheni.
Svitsa br br nickel pot filler faucet
Iko kurongedza kweputi kuzadza faucet ndeyekuti iwe unogona kuiisa kumadziro padyo nechitofu chako. Iyo inogona kuve yakachengetwa zviri nyore kumadziro nekuda kwemaitiro maviri epakati ekutsvedza. Nenzira iyi haisi kunetsa yako yekubika nzvimbo sezvo inojekesa nzvimbo yekubikira. Asi iwe unenge uine inoshamisika kusvika kweinosvika makumi maviri nemasere inches kuitira kuti inogona kuzadza chero pombi pane chero stove gomba. Iyo pot filler faucet inogona kupamhidzirwa nyore kana iwe uchinyatsoida, uye woidzorera ipapo kana wapedza. Paunenge waisa iyi nickel pot filler faucet, iwe unozvidemba kuti hauna kuisa ichi chidimbu chemishini pamberi.
Mvura inoendawo zvakare mushe nemhando yepamusoro yeNeoperl ABS aerator. Inokupa iwe ine anti-splatter uye inodonha-isina mvura ruzivo. Kuzadza mapoto pachitofu chako chekubheka nesimba rakazara remvura hakuzokonzerezve kuputika. Kupararira mvura kunogona kukonzera mamiriro ezvinhu ane njodzi, kunyanya kana uchibheka pane mamwe makomba emoto wechitofu chako chekicheni. Chitofu chako chekubheka chinogara chengetedza nguva dzese, uye ungatoishandisa kana pombi dzemoto dzadzimwa, pasina kukonzera njodzi mukicheni yako.
Hunhu hwakarukwa nickel pot filler faucet
Mavhavha maviri eaya akaiswa nickel pot filler faucet anogadzirwa neceramic zvinhu, uye anovimbisa kutendeuka kwakanaka. Iwe unoona kuti mavharuvhu haana kukonzera backlash zvachose uye hapana kupopana futi. Nekuda kweizvozvo iwe unovimbiswa vekunyorovesa kushanda. Kunyangwe kana uine majoini asina kusimba, iyi nickel pot filler faucet inogona kushanda nyore. Nekuda kwayo ergonomic dhizaini, madziro akaiswa asina stain muhari dhizaina akasununguka kwazvo kushandisa. Maoko maviri mazana matatu anotenderera anokamhina anoshanda zvakapusa kushanda futi.
Yayo yakakwirira-giredhi simbi isina zvinhu inoiti ino br briti nickel pot filler faucet yakasimba kwazvo. Iyo yakaiswa nickel pamusoro peiyi pombi filler faucet zviri zviviri zvinopesana nekukasira uye kusagadzikana-isina. Izvo zvinongedzo zvakagadzirwa nendarira yakasimba, iyo inovimbisa kuyerera kwemvura ine hutano pasina chero simbi yakasara mairi. Mhinduro yakanakisa saka yehutano hwako iwe nemhuri yako. Nekuda kwehunhu, iyi nickel pot filler faucet inowanzo kushandiswa munzvimbo dzekutengesa mumaresitorendi zvakare.
Warranty br br nickel pot filler faucet
Iyo bramm nickel pot filler faucet inouya nekodhi yakazara yekuisa. Neiyi yekuisa kit unokwanisa kuisa nyore nyore bramm nickel pot filler faucet iwe pachako pasina matambudziko. Izvi zvinokuchengetera inodhura pombi dzemitengo. Iyo yekuisa kit inouya nezvose zvinhu zvaunoda kuti ubatanidze madziro-akaiswa pombi filler faucet. Kusanganisira yeAllen wrench, Teflon tepi, uye magurovhosi ekuisa kuti asakuvadza maoko ako uye kuti achengete akachena panguva yekuisa. Isu saka tinovimbisa kuti iwe unogona kuisa iyi yakaomeswa nickel pot filler faucet iwe mukati mehafu yeawa. Ehe chete pane mamiriro ekuti iwe une pombi yemvura panzvimbo chaiyo.
Sezvo WOWOW iri iyo inogutsika nehunhu hwe br br nickel pot filler faucet, inokupa iwe inoenderana neyemakore mashanu-waranti nguva. Sezvo WOWOW inopa yakanakisa kukosha yemari iwe yaunogona kuwana, inokupawo iwe-yezuva -omwe-zuva mari yekudzoserwa mari Naizvozvo haumhanyi njodzi zvachose. Kana iwe usingazove nekugutsikana neiyi yakaiswa nickel pot filler faucet, iwe unongowana mari yakazara. WOWOW inomiririra chigadzirwa chayo uye kuti iwe unogona kuona nekukurumidza. Zvakanakira bhurukwa rekuti nickel pot filler faucet muchidimbu:
• Yazvino dhizaini muhari dhiza
• Hwakanaka majoini uye mavhavha
• Yakachengeteka kwazvo kushandisa
• Yakaputirwa nickel kupedzisa
• Chiri nyore kuisa mumaminitsi makumi matatu
SKU: 2311300 Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Kicheni Faucets Tags: Bronze Nickel, Pot Yekuzadza, Mumwe Lever